सेरेनाको कार्टुन जसले मच्चायो हंगामा ! - Dainik Nepal
सेरेनाको कार्टुन जसले मच्चायो हंगामा !
दैनिक नेपाल २०७५ भदौ २६ गते १३:५४
काठमाडौं । एकल महिला तर्फको यूएस ओपन टेनिसको उपाधि भिडन्तमा जापानकी नाओमी ओसाकासँग हारेपछि सेरेना विलियम्सको एकाएक चर्चा चुलियो । किनकी सेरेना ६ पटककी टेनिस विजेता थिईन् । चर्चा चुलिनुको कारण यहि सोच्नुभएको छ भने तपाईको अनुमान यहाँनेर भने मिलेन । सेरेना चर्चामा आउनको कारण उनको पछिल्लो व्यवहार बनेको छ ।
उपाधि भिडन्तमा ओसाकासँग हारेपछि सेरेनाले रेफ्रीलाई गालीगलौज गरेकी थिइन् । र फेरि पछि आफैंले माफी समेत मागेकी थिइन् । यहि कुराले उनी उपाधि विजेता भन्दा बढि मेडियामा छाइन् । तर रोचक कुरो के भने अरुकै कारण पनि उनको चर्चा फेरि चुलियो । उनी यतिवेला सोसल मेडियामा निकै चर्चाकी पात्र भएकी छन् ।
अस्ट्रेलियाका कार्टुनिस्ट मार्क नाइटले उनको एउटा यस्तो कार्टुन बनाए जसले फेरि सेरेनाकोबारेमा चर्चा भयो । द हेराल्ड सन का लागि उनले बनाएको सेरेनाको कार्टुनले सोसल मेडियामा चर्चा बटुलेको छ यतिवेला । उनले कार्टुनमा सेरेनाले उपाधि हारेपछि देखाएको व्यवहारबारे प्रष्टाउन खोजेका छन् ।
कतिपयले सेरेना काला जातिको भएकाले उनीमाथि विभेदसमेत भएको प्रतिक्रिया दिईरहेका वेला मार्क आफैंले चाहिँ त्यो स्वीकार्दैनन् । उनी भन्छन् “कार्टुनमा कुनै गलत छैन, तर मलाई माफ गर्नुहोस् कि यो सोशल मिडियाद्वारा लिइयो र यति धेरै विकृत छ ।”
मार्कले बनाएको त्यो कार्टुन तपाई पनि हेर्नुस् ।